It is me. Ko Niknayman.: အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် သင့်ကို အရေးတကြီး အလိုရှိသည်။ ( ညီညွတ်ခြင်း အပိုင်း ၆)
အော်အော်၍ ရယ်ရမည်လား … ရှိုက်ရှိုက်၍ ငိုရမည်လား …. (ဒေါသ ကိလေသာ) ကတော့ ဒီအတွေး ပေါ်လာတိုင်း အကြီးအကျယ် ထကြွ နှောင့်ယှက် လာနေသည်။
Posted by အာဇာနည် at 9:31 PM